Maalinta Kala-Guurka!! - Wakhtigii Ay Borussia Dortmund U Qabatay Iibka Jadon Sancho Oo Maanta Ku Eeg & Waxa Dhici Kara Haddii War Cad Laga Waayo Man United Isla Maanta - Gool24.Net
Maalinta Kala-Guurka!! – Wakhtigii Ay Borussia Dortmund U Qabatay Iibka Jadon Sancho Oo Maanta Ku Eeg & Waxa Dhici Kara Haddii War Cad Laga Waayo Man United Isla Maanta
Manchester United ayaa heshiiska ay ku doonaysay garabka kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho soo gaadhsiisay ilaa 10-ka August oo ah maanta isla markaana ku beegan maalintii ay Dortmund doonaysay in kahor heshiiska xiddigeedu dhinac u dhaco.
Taas ayaa la micno ah inay maanta tahay maalintii kala guurka ee heshiiska ay Manchester ku doonaysay xiddiga bar-tilmaameedkeeda ugu sarreeya usoo ahaa.
Borussia Dortmund ayaa si cad u sheegtay aragtideeda ah inay doonayso inay iibiso Jadon Sancho balse dul dhigtay lacag adag oo 108 Milyan oo Pound ah taas oo ay ilaa hadda United ka cago jiidayso inay bixiso.
Madaxda sarre ee Dortmund ayaa dhigooda Man United hore ugu sheegay inay haystaan ilaa 10-ka August oo maanta ah si ay boos wanaagsan ugu soo istaagaan saxeexa 20 sano jirka ree England isla markaana ay waxkasta sidii loogu talo galay u dhammeeyaan.
Iyadoo uu saamayn baahsan kubadda cagta ku yeeshan xanuunka Korona sidoo kalena ay dunida oo dhan ciyaaraheedii kala duwanaa mudo dib u dhac ku jireen ayay ka dhigan tahay in suuqa xagaagani uu sidii hore ka mudo yar yahay kooxuhuna ay wakhti intii hore ka kooban haystaan.
Kala duwanaanshaha Man United iyo Dortmund ee haatan ayaa ah lacagaha ay ku kala qiimaynayaan Sancho, madaxa Manchester United ee Ed Woodward ayaa isagu doonaya qiime ka hooseeya midka ay Dortmund ku rabto ciyaaryahankeeda.
Heshiiska Jadon Sancho ee Dortmund ayay laba sano ka hadhsan yihiin taas oo ka dhigan inaysan qabin wax cadaadis ah oo ku qasbaya inay iibiyaan.
Ugu dambay, waxa ay yeeli karto Dortmund isla maanta amaba maalmaha soo socda ayaa ah inay gabi ahaanba ka baxaan heshiiskan haddii ay Red Devils sii wadaan inay dib u riixaan qandaraas qabsooma.